सर्वोच्चले शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठ र रुपा सुनारलाई किन बोलायो ? – Hamro24News
सर्वोच्चले शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठ र रुपा सुनारलाई किन बोलायो ?
July 7, 2021 adminLeaveaComment on सर्वोच्चले शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठ र रुपा सुनारलाई किन बोलायो ?
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई असार २९ गते अदालतमा बोलाएको छ ।
प्रहरी कार्यालयमा नै पुगेर मन्त्रीले नै जातीय विभेदको विषयमा अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्न खाेजेकाे भन्दै उनीविरुद्ध जाहेरी दर्ताको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले छलफलका लागि बोलाएको हो । बहसका लागि मन्त्री श्रेष्ठ र रुपा सुनारलाई पनि अदालतले बोलाएको हो ।
बबरमहलस्थित घर भएकी सरस्वती प्रधानले दलित भएकै कारण सुनारलाई कोठा भाडामा दिन इन्कार गरेकी थिइन् ।
उनीमाथि अनुसन्धान चलिरहेका बेला शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी कार्यालयमा पुगेर प्रधानलाई गाडीमा लिफट् दिएका थिए । मन्त्रीले नै जातीय विभेद गर्नेलाई संरक्षण गर्न खोजेको भन्दै उनलाई पदबाट उनीविरुद्ध जाहेरी दर्ताको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले छलफलका लागि बोलाएको हो ।
अदालतले जातीय विभेद गरेको भन्दै तपाईंमाथि किन मुद्दा नलचाउने भनेर प्रश्न पनि सोधेको छ । यो मुद्दा कुमार रेग्मीको इजलासमा छ । मुद्दामा अग्राधिकार दिई पेशी तोक्न र १५ दिन भित्र लिखित जवाफ बुझाउन पनि भनिएको छ । मन्त्रीले विभेद गरेको भन्दै उनलाई पनि पदबाट हटाउनुपर्ने माग सुनारले गरेकी छिन् ।
‘जातको आधारमा व्यक्ति विरूद्ध छुवाछुतको भेदभाव गरिने कार्य क्रुर र अमानवीय भएकोमा विवाद छैन। यस्तो कार्य संविधान र कानूनले वर्जित गरेको छ र दण्डनीय अपराध मानेको छ,ु सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ुरिट निवेदकले आफू विरूद्ध जातको आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिएको कानूनबमोजिम अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारवाही होस भन्ने माग गर्नु निवेदकको कानूनी अपेक्षाको विषय रहेको र निवेदकलाई न्यायदिनु राज्यको कर्तव्य रहेको हाँदा सो सम्बन्धमा के कसो भएको छ कसरी अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ भनि विपक्षीहरू समेतको सहभागितामा छलफल गरी अन्तरिम आदेश हुनेरनहुने निर्णय हुनेछ। दुवैपक्षलाई सूचना दिनू ।
यस्ताे छ निशेधाज्ञा खुलेपछिकाे काेराेनाकाे असर र प्रभाव ?
प्रेमीसंग निस्किएकी बिना भिडियो कल गर्दागर्दै फिल्मि सैलिमा गायब, प्रेमीको बारेमा यस्तो खुलासा गर्दै बिनाकी आमा मिडियामा (भिडियो)
साउनको दुई गतेपछि पुनः कडा निषेधाज्ञा !
टालटुले विकास ?